Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Septhemba 22, 2018 00: 00 Awekho amazwana
Naphezu kwendaba yakhe a umholi wohlobo lwe " Littattafan Soyayya "Noma" thanda izincwadi ". Ungomunye wababhali bezilimi ezimbalwa Hausa umsebenzi wakhe ohunyushwe ngesiNgisi. Ubuye wasebenza njengomlobi we-skrini, umkhiqizi nomenzi wefilimu Kannywood.
Eseneminyaka engu-13 wahoxiswa esikoleni futhi washadelwa esemncane. Kanjalo, ubhala iHausa hhayi isiNgisi. Izindaba zakhe zigxile kakhulu ezindabeni ezinjengomshado ophoqiwe kanye nemfundo yabesifazane.
Balaraba Ramat noYakubu ungudade osemncane we-general Murtala Ramat UMuhamedi, owasebenza kafushane njengomholi wezempi waseNigeria kusukela ngo-1975 waze wabulawa ngo-1976. Ngenxa yokuzibophezela kwakhe, umklomelo wokubhala Balaraba Ramat noYakubu ngoba yaseshashalazini yaseHausa yadala ukuhlonipha umsebenzi wakhe.
Inani lemfundo yezibalo: Lapho sakha iJometri, i-Trigonometry nazo zonke ezinye izindlela zokubala, asikhulumi ngezinto eziyinkimbinkimbi
I-Oct21 08: 08